Afar carruur ah iyo aabbihii dhalay oo ku dhintay biyo sumaysan iyo hooyadii iyo qaar ka mid ah carruurtii qoyska oo la il-daran suntaasi. – Radio Daljir
Afar carruur ah iyo aabbihii dhalay oo ku dhintay biyo sumaysan iyo hooyadii iyo qaar ka mid ah carruurtii qoyska oo la il-daran suntaasi.
Qardho, July 18 – Wararka ka imaanaya magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa ku warramaya in ay dhinteen afar qof, afar kalena ay aad u il-daran yihiin kaddib markii sida loo badinayo ay cabbeen biyo sumaysan.
Afarta qof ee dhimatay ayaa la tilmaamayaa in ay ahaayeen aabbe saddex wiil oo uu dhalay kuwaasi oo qaarkood ay ku naf-baxeen deegaankii ay biyaha ku cabbeen halka kuwa kalena ay ku dhinteen isbitaalka magaalada Qardho oo goor dambe oo galabtay ah la soo gaarsiiyey.
Afarta qof ee kale ee la il-daran sumawgaan, laguna dabiibayo isbitaalka Qardho ayaa iyana isla qoyska ka mid ah kuwaasi oo ah hooyadii carruurta dhashay iyo saddex il-mood oo kale oo dhammaantood gabdho ah.
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Qardho ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin dadkaani in ay sumoodeen iyagoo muujiyey caddaymo la xiriira caalaamaadka Sunta, inkastoo wali aan si rasmi ah loo caddayn karin meesha ay ka timid masiibada qoyskaasi haleeshay.
Deegaanka arrintani ka dhacday ayaa waxaa lagu magacaabaa Addin-geri, taasoo hoos tagta degmada Rako ee gobolka Karkaar, waxaana dadkaani lagu arkay oo ku soo booday shuban, matag iyo dhig dhanwalba oo wakhti kooban qoyskaasi oo dhan galiyey marxalad aysan waxba ka sheegi karin dhibaatada ku habsatay.
Guddoomiyaha degmada Rako ee gobolka Karkaar Faarax Maxamuud Ibraahim ‘Faarax Duqsi’ ayaa Radio Daljir u sheegay in ay wadaan baaritaanno la xiriira sababta arrintaasi keentay, ayna la kaashanayaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar.